ထိုင်း ၊ မလေးရှာ နှင့် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေကြားက မူးယစ်ဆေးဝါး အကြောင်း တစေ့တစောင်း ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
ထိုင်း ၊ မလေးရှာ နှင့် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေကြားက မူးယစ်ဆေးဝါး အကြောင်း တစေ့တစောင်း
2/16/2016 06:57:00 am ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
စင်္ကာပူရောက် တချို့မြန်မာ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲက (ငါး)
ငါး ဆိုတဲ့နာမည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်လောက်က နာမည်ကြီး မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ်ဖိုးပြီးရင် နံပါတ်ငါးဆိုသလို အရမ်းအရေးပါခဲ့လို့ လူသုံးများခဲ့ပါတယ်။ဖက်စီဒိုင်း ဖက်စီဒိုင်း စွဲနေပြီ မဟုတ်လား ဆိုတဲ့ သီချင်းတောင်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြမှာပါ။
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်တစ်မျိုးပေါ့ (cough medicine orlinctus when in syrup form isamedicinal drug used in an attempt to
treat coughing and related conditions.)မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီနောက် အရမ်းဈေးကြီးပေးဝယ်ခဲ့ရတော့စီးပွါးပျက်ခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီး
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့တဲ့ ဆေးရည်ပေါ့ဗျာ။စင်္ကာပူတို့၊ မလေးရှားတို့၊ ထိုင်းတို့မှာ တချို့မြန်မာတွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်
နောက်ပိုင်း ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်ကျတော့အဲဒီဆေးရည်နာမည်ကို ထပ်မကြားရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါး ဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့အခုထိ ကျန်နေဆဲပဲလေ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအရ တင်သွင်းလာဖို့ အခက်အခဲရှိလို့ပါ။ တရားဝင်တင်သွင်းနေကြချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်တစ်မျိုးမျိုးကို ငါး
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်တိုင်းဟာ လူတွေကိုမှိန်းစေနိုင်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးအသွင်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာ မယုံရင်ကိုယ်တိုင်ဆေးခန်းသွားပြပြီ ချောင်းဆိုး
အဲဒီဆေးရည်ကို တခါသောက်သုံးရန် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက် အဆများစွာပိုပြီးသောက်လိုက်ပါ။ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ငါး ဆိုတာချည်းကိုရေးကြီးခွင်
တကယ်တန်းပြောရမှာ စင်္ကာပူ အမျိုးသားရေး ကောင်စီ (National Council) ကဆန့်ကျင်နေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေပဲလေ။ အဲဒီထဲမှာ ငါး ဆိုတာ မပါဝင်ပါဘူး။မပါဝင်တာကိုတရားဝင်ရောင်းဝယ်လို့ရတယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အရေးမကြီးလို့မပါဝင်တာပါ။ ဘာဆေးဝါးမဆို လိုတာထက်ပိုပြီး သုံးစွဲ ရောင်းဝယ်နေရင်
သိထားသင့်တဲ့ စင်္ကာပူက မူးယစ်ဆေးဝါး
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အဓိကအရေးယူနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကတော့
၁။ ဆေးခြောက် (Cannabis)
Marijuana, pot, grass, joints, ganja လို့ ခေါ်ဝေါ်နေကြပါတယ်။
မြန်မာတွေကတော့ မုန့် လို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။
•Cannabis comes from the hemp plant Cannabis Sativa. The whole plant is
dried and compressed into blocks until it looks like dried herbs or tea.
•Cannabis causesaperson's mind to become addicted. It contains a
chemical that affects one's mood and the way one sees and hears things.
•Cannabis affects one's concentration and memory, hence it weakens the
abuser's ability to learn. Cannabis abusers are likely to move on to
stronger and deadlier drugs.
•Poor balance and co-ordination
•Anxiety or panic
•Hallucination - imagining objects, hearing sounds
Illegal traffic, import or export of :
•Cannabis resin of more than 200 grams - DEATH.
•Cannabis mixture of more than 1 kilogram - DEATH.
•Possession and consumption of cannabis - up to S$20,000
fine or 10 years imprisonment or BOTH.
၂။ ကိုကင်း (Cocaine)
Crack, coke, snow လို့ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြတယ်။
•Cocaine is derived from the leaves of the Erthroxylum Coca plant.
•In its pure form, cocaine isawhite crystalline powder and it is
either sniffed in powder form or injected into the body in liquid form.
•Cocaine is bothacentral nervous system stimulant and an anaesthetic.
The chronic cocaine abuser is socially dangerous because of the mental
abnormalities caused by the drug.
•Increased heart rate and blood pressure
•Loss of appetite and weight
•Fear and anxiety
•Illegal traffic in cocaine of more than 500 grams - DEATH.
•Illegal import or export of cocaine of more than 30 grams - DEATH.
•Possession and consumption of cocaine – Up to S$20,000 fine or 10
years imprisonment or BOTH.
၃။ Depressants (referred to in slang asa"downer," isachemical
agent that diminishes the function or activity ofaspecific part of
Upjohn and Erimin လို့ သိကြတယ်လို့တော့ပြောတာပဲ။ မကြားဖူးသေးပါဘူး။
•Depressants are drugs which helpaperson to calm down and sleep.
•Depressants are usually taken orally by abusers. The drug may also be
dissolved in water and then injected into the body. This can cause
infections as the drug powder is usually not totally dissolved and it
remains under the skin or the vein.
An abuser who cannot get his regular supply may suffer from severe
•Illegal traffic - Up to 10 years imprisonment and5strokes of the cane.
•Illegal import or export - Up to 20 years imprisonment and 15 strokes of the cane.
•Possession and consumption - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.
၄။ စိတ်ကြွဆေး (Ecstasy)
Pink or Pink Lady, Snow White, Playboy, Apple, XTC လို့ခေါ်ကြတာပဲ။
•MDMA, more commonly known as 'Ecstasy' comes inatablet or capsule form.
It is often sold in discos and night joints.
•'Ecstasy' causes permanent damage to the heart and liver. People may
take it to enable them to dance all night and sometimes they die from
•Chemicals such as paracetamol and calcium carbonate, are often mixed with Ecstasy.
This may cause bad reactions to the body.
•Increased blood pressure and pulse rate
•False feelings of confidence and closeness with others
•Convulsions, jaw clenching and teeth grinding
•Vomiting and anxiety
•Paranoid feelings: extreme fear and anxiety
•Illegal traffic of 'Ecstasy' - up to 20 years imprisonment and 15 strokes.
•Illegal import or export of 'Ecstasy' - up to 30 years imprisonment and 15 strokes.
•Possession and consumption of 'Ecstasy' - up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment
၅။ Flunitrazepam (Flunitrazepam is commonly prescribed for the
treatment of insomnia. Insomnia can be described asadifficulty falling
asleep, frequent awakening, early awakenings oracombination of both.)
Rohypnol, Roachies, Roofies, Rophies, 'Forget-me Pill'
•'Rohypnol' is used in some countries for prescription use as a
treatment for insomnia,asedative, and asapre-surgery anaesthetic. It
is taken to relieve anxiety and for muscle relaxation.
•'Rohypnol' is tasteless and odourless, and it dissolves quite easily in
carbonated beverages and alcohol, thus making it popular for use as a
date-rape drug. Ketamine is also usedadate-rape drug due to the
'disassociative effect' it has on the abusers.
•Illegal traffic of 'Rohypnol' - Up to 10 years imprisonment and5strokes of the cane.
•Illegal import or export of 'Rohypnol' - Up to 20 years imprisonment and 15 strokes of the cane.
•Possession and consumption of 'Rohypnol' - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.
၆။ ဘိန်းဖြူ (Heroin)
White, smack, junk, powder, putih, medicine, ubat
•Heroin isapowerful and very addictive drug that comes in granular, powder or solution form.
•Heroin No.4is white in colour while Heroin No.3is more yellowish.
•Heroin is the primary drug of abuse in Singapore. Heroin abusers feel
dull and tire very easily. They cannot work properly as they are not
able to concentrate.
•"Chasing the Dragon",acommon method of abuse used by heroin abusers
here, involves heating the heroin powder and sniffing the fumes through a
If an abuser tries to stop using heroin, his body reacts strongly and he experiences painful
•Aches and spasms
•Stomach cramps and convulsions
•Shaking and vomiting
•Illegal traffic, import or export of heroin of more than 15 grams - DEATH.
•Possession and consumption of heroin - up to S$20,000 fine or 10 years
၇။ ရေခဲ (Ice)
'Ice', glass, crystal, quartz, ice cream, hirropon and shabu
•Methamphetamine hydrochloride is more commonly known as 'Ice' in
Singapore. It isastrong stimulant which comes inacrystallized form.
It is odourless and colourless.
•'Ice' hasavery strong effect on the nervous system and is highly
addictive. Besides experiencingatemporary sense of well being, the
abuser also feels anxious restlessness which can lead to violent
•Damage to the heart
•Illegal traffic, import or export of 'Ice' of more than 250 grams - DEATH.
•Possession and consumption of 'Ice' - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.
၈။ Inhalants (Inhalants are drugs that are inhaled asagas,
vapor, or aerosol. Some inhalants are used for medical purposes, such as
anesthesia and the delivery of medication to the lungs (for example by
an inhaler or nebulizer to administer asthma medication.) )
Glue-sniffing, solvent abuse, solvent inhalation, solvent sniffing
•Some substances, such as glue and paint thinner, give off vapours and fumes.
The sniffing of vapour is known as inhalant abuse.
•Inhalant abuse affects the growth and development of muscles, nerves
and organs. If you are an inhalant abuser, normal activities like
running or shouting can cause death by heart failure. An inhalant abuser
may die from suffocation anytime. This is known as Sudden Sniffing
Death. It can happen on the very first time or any other time the abuser
•Inability to think
•Easy bleeding and bruising
•Damage to the central nervous system
•Stomach and urinary pains
•Selling or offering to sell an intoxicating substance when it is
suspected that the substance is for the purpose of intoxication - Up to
S$5,000 fine or2years imprisonment or BOTH.
•Refusingablood specimen test - Up to S$2,000 fine or3months imprisonment.
•Abuse of intoxicating substance - Admission toarehabilitation center
for up to6months or up to S$2,000 fine and/or6months imprisonment.
၉။ Ketamine (ketamine is classified as an NMDA receptor
antagonist, and, like other drugs of this class such as tiletamine, and
phencyclidine (PCP), inducesastate referred to as "dissociative
anesthesia." As with other pharmaceuticals of this type, ketamine is
used illicitly asarecreational drug, sometimes referred to as Special
K, Special K, Vitamin K, Kit Kat
•Ketamine is an anaesthetic for veterinary as well as human use. The
drug takes the form ofawhite crystalline powder,aliquid oratablet.
Asadrug of abuse in the US and Australia, Ketamine has become common
at dance parties or 'raves'.
•Ketamine producesaprogression of effects fromastate of dreamy
intoxication to delirium accompanied by the inability to move, feel pain
or remember what has occurred while under the drug's influence. The
effects of Ketamine last an hour or less but the drug can affect the
senses, judgement and coordination for 18 to 24 hours.
•Alter sensation, mood and consciousness
•Distort hearing, touch, smell, taste and visual sensation
•Illegal traffic of Ketamine - Up to 20 years imprisonment and 10 strokes of the cane.
•Illegal import or export of Ketamine - Up to 30 years imprisonment or imprisonment for
life and 15 strokes of the cane.
•Possession and consumption of Ketamine - Up to S$20,000 fine or 10 years
၁၀။ Methamphetamine ((methylamphetamine or desoxyephedrine),
popularly shortened to meth and also nicknamed "ice", is a
psychostimulant and sympathomimetic drug.)
yaba, crazy horse pill
•The stimulant powder in 'yaba' is produced from the ephedrine plant. By
adding other substances like dyes, the bulk material for the tabletting
process is prepared. The different colours of the stimulant powder are
used to distinguish the quality and purity of the methamphetamine used.
Most of the 'yaba' tablets found are embossed with the 'WY' logo and are
green and orange in colour.
•Some labourers abuse 'yaba' for economic purpose to give themaboost
so that they can work longer hours. Other reasons for its abuse include
its affordability and ease of consumption than other drugs.
•Increased heart beat
•Illegal traffic, import or export of 'Yaba' of more than 250 grams - DEATH.
•Possession and consumption of 'Yaba' - Up to S$20,000 fine or 10 years imprisonment or BOTH.
၁၁။ မော်ဖင်း (Morphine)
နာကျင်မှု ဝေဒနာသက်သာစေရန် အသုံးပြုသည့် ဘိန်းမှ ထုတ်လုပ် ရရှိသော
When raw opium is purified,alight brown powder called morphine base is
produced. Morphine itself isawhite powder. It can come in block,
tablet, capsule, powder or solution form.
If an abuser tries to stop using morphine, his body reacts strongly and he experiences
painful withdrawal symptoms:
•Illegal traffic, import or export of morphine of more than 30 grams - DEATH.
•Possession and consumption of morphine - up to S$20,000 fine or 10 years
၁၂။ ဘိန်း (Opium)
Raw opium is brown, hard like rubber and hasastrong smell. When it is
cooked, it becomes dark brown or black colour and is called “prepared
Apparatus for Opium
•In most cases, opium is usually smoked by using opium pipes of
different forms. The pipe hasalong thick stem withabowl-shaped head
at one end. A small piece of opium is put into the head of the pipe and
heated. Smoke is produced and inhaled through the stem of the pipe.
If an abuser tries to stop using opium, his body reacts strongly and
he experiences painful withdrawal symptoms:
•Illegal traffic, import or export of opium of more than 1200g and
containing more than 30g of morphine – DEATH.
•Possession and consumption of opium – up to S$20,000 fine
or 10 years imprisonment or BOTH.
ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး သိထားတော့ ကောင်းတာပေါ့။ဗဟုသုတလည်းရတာပေါ့။ တစ်ခုသတိထားရမှာ ကီလို ရောင်းတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။သူများပစ္စည်းသယ်တဲ့အခါ အဲဒီ ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးပါနေရင်
မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပေတယ်။ ရတာနဲ့ ရှင်းရတာ မကာမိပါဘူး။ ရှင်းမနိုင်ရင်
မူးယစ်ဆေးဝါးကို သုံးစွဲနေသူဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
သြော် .... မလျှောက်ဖူးတဲ့လမ်း အကြောင်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိုင်ပါ့မလဲနော်။မရင့်ကျက်သေးတဲ့အရွယ်မှာ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေအရွယ်မှာ အဲလို
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိုင်မလဲလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးမိတိုင်းကိုယ်တိုင်လျှောက်ကြည့်လို့ ပြန်ဖြေလေ့ရှိခဲ့တယ်လေ။ တကယ်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်လို့ အဲလိုမျိုး ပြန်ဖြေမိတာလား၊ ပိုမိုတိကျတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိချင်နေ
လူကြီးသူမတွေရဲ့ စကားကနားထဲမ၀င်၊ လက်ခံနိုင်ဖို့မကြိုးစား၊ အယုံအကြည်မရှိကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်နေခဲ့တာပေါ့။ ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတော့ ပြောရမှာခက်သားပဲ။သူတို့ကို စတင်မိတ်ဆက်သူကတော့ ဆေးလိပ်ပေါ့။
တခါတလေ အရက်၊ ဘီယာတွေကစတင်မိတ်ဆက်သူ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့မူးယစ်ခြင်းကို ခံစားတတ်လာတာပေါ့ဗျာ။ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ ဘာမှမသုံးဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
မူးယစ်စေတတ်တဲ့ ဆေးဝါးတစ်ခုခုသုံးစွဲနေသူ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ
ပြီး ဆေးစစ်ခံချင်တဲ့သူ ရှိပါ့မလား။
တချို့တွေက ဆရာဝန်တွေကိုပါ လှည့်စား အသုံးချတတ်တယ်လေ။
ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီ အချိန်မှာ မိမိကိုယ်
ကိုယုံကြည်မှုနည်းနေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လူကြီးတွေ မရိတ်မိရင်တော့ နောက်ပိုင်း
ဟန်ဆောင်ကောင်းလာကြတာပေါ့။ဆေးခြောက် သုံးစွဲသူဟာ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်
စေရမယ်။ ဆေးလိပ်ထဲထည့်ပြီသုံးသုံး၊ pot နဲ့ပဲသုံးသုံး ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်မှ သုံး
တတ်ပေမယ်။ မိဘကဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်ရင် ဆေးလိပ်အနံ့၊ မီးခိုးအနံ့ ရလိုက်
သာမန်ဆေးလိပ်အနံ့နဲ့မတူတဲ့ သင်းပျံ့တဲ့အနံ့တစ်မျိုးပါ။ ဟင်းထဲမှာ ထည့်ချက်ထားရင်လည်း
သိနိုင် ပါတယ်။ အရက်၊ ဘီယာလို ပါးစပ်ကအနံ့အသက်မရဘဲ မူးယစ်နေတတ်ပါတယ်။ မူးယစ်
တာ ကြာရှည်နေပြီ ဆေးလိပ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်သောက်နေတတ်ပါတယ်။ စကားအရမ်းပြော
လာမယ်။ အလွန်အကျူး စားသောက်လာမယ်။
အပြင်ပိုင်းကတော့သာမန်လူတွေအကြား သိပ်မသိသာပေမယ့် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနေတတ်
ပါတယ်။အနီးကပ်ဆုံးသူတွေက ရိတ်မိမှာပါ။ အိပ်ဆေးတို့၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတို့၊ လည်
ချောင်းကင်ဆာသက်သာဆေးတို့၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးတို့၊ စိတ်ကြွဆေးတို့၊ နှလုံးအားတိုးဆေးတို့
ကို မူးယစ်ဆေးအဖြစ်အဆပေါင်းများစွာ သုံးစွဲသူတွေကတော့ အပြင်ပိုင်းအမူအယာရော၊ စိတ်
ပိုင်းဆိုင်ရာရော ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲနေ တတ်ပါတယ်။
အိပ်ငိုက်နေမယ်(ဒါပေမယ့် အိပ်မပျော်)၊ မှိန်းနေမယ်၊ မျက်လုံးကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေ
မယ်၊တစ်ခုခု ကို တွေးနေမယ်၊ ခဏခဏမေ့တတ်နေမယ်၊ ပြောပြီဆိုပြီတဲ့ စကားများကို ပြန်ပြန်
မေးနေတတ်မယ်တစ်ခုခုကို သတိထားနေတတ်မယ်၊ မရေမရာတာတစ်ခုခုကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး
စိတ်ကြွဆေးကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် တက်ကြွနေလိမ့်မယ်။ စိတ်စွမ်းအင်ကိုအရမ်းအ
သုံးချထားတော့ ဆေးရှိန်ပြေချိန်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံး စမ်းသပ်နည်း
တစ်ခုကတော့ စကားတစ်ခွန်းသို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကားတစ်ကားကို အဲလိုဖြစ်နေချိန်မှာ အမှတ်
တမဲ့ ပြောစေ သို့မဟုတ်ကြည့်စေပြီ နောက်တစ်ရက် နှစ်ရက်ကြာမှ အမှတ်တရပုံစံနဲ့ ပြန်
ပြန်ပြောခိုင်းပါ။ မှတ်မိနိုင်မယ် မထင်ပါ။ နောက်တစ်နည်းက မျက်လုံးအတွင်းက aperture
ကိုကြည့်ပြီ သိနိုင်ပါတယ်။မျက်လုံးရဲ့ သဘာဝလှုပ်ရှားမှုကို လိမ်လို့မရပါဘူး။ အမှောင်ထဲက
နေအလင်းရောက်ရင် ရုတ်တရက် မျက်စိကျိန်းသလို၊ အလင်းကနေ အမှောင်ထဲရောက်ရင်
ချက်ချင်းဘာမှမမြင်ရတော့တာတွေဟာ aperture ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်နေရလို့ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်က အလင်းများရင် apertureကသဘာဝအလျောက်ကျဉ်းပေးပြီ၊ အလင်းနည်း
မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူတွေဟာ အာရုံကြောတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက် apertureရဲ့လှုပ်ရှား
မှုဟာ သာမန်လူတွေထက် နှောင့်နှေးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဝါရင့်ဆေးသမား တွေကို
ကြည့်ရင် မျက်လုံးကြောင်နေတာကို သိသိသာသာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာမှ လှုပ်ရှားမှု
မရှိဘဲ ငြိမ်သက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို တချို့မိန်းကလေးတွေကအဲဒီအကြည့်နဲ့
မျက်တောင်မခတ်ပဲ ငြိမ်သက်နေခြင်းဟာတုန့်ပြန်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေ နှေးနေလို့ပါ။
ဆရာဝန်တွေ မျက်လုံးထဲကို မီးထိုးပြီ ကြည့်တတ်တာကို သတိထားမိကြမှာပါ။မီးအလင်း
ကြောင့် aperture ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု (ကျဉ်းသွားတဲ့ နှုန်း) တုန့်ပြန်မှုတွေကို သိချင်တာရယ်
အဖျားကြောင့် မျက် လုံးအတွင်းရှိ သွေးကြောငယ်လေးတွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကိုသိချင်တာ
အရက်သမား၊ ဆေးသမားတွေဟာ သုံးစွဲထားချိန်မှာမျက်လုံးနီတတ်ပါတယ်။
မျက်ကွင်းညိုတတ်ပါတယ်။နှုတ်ခမ်းပြာတတ်ပါတယ်။ အကြား အာရုံနည်းပြီ
ရုတ်တရက် ခေါ်မကြား အော်မကြားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အာရုံကြောတွေရဲ့
သဘာဝ တုန့်ပြန်မှုတွေ နှေးကွေးနေလို့ပါ။
လမ်းလျှောက်ရင်ရိုင်တာတို့၊ လက်တုန်တာတို့၊ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုင်ရင်မမြဲမြံတာတို့
တစ်ခုခုကို မှီနေချင်တာတို့၊ တစ်ခုခုကို ငြိမ်သက်စွာစိုက်ကြည့်နေတတ်တာတို့ စသဖြင့်
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေက မျက်လုံးလောက် မထင်ရှားစေနိုင်ပါဘူး။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ တချို့တွေက မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားချိန်မှာသာမန်ထက် စိတ်တို
ဒေါသထွက်လွယ်တတ်သလို၊ တချို့တွေကျပြန်တော့သာမန်အခြေအနေထက် စိတ်ရှည်
ကြောက်တတ်တဲ့သူဆို သတ္တိရှိလာပြီ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့သူတွေကြောက်တတ်လာသလိုမျိုး
ပေါ့။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကတော့ သာမန်ထက်နှောင့်နှေးညံ့ဖျင်းနေတတ်သလို၊ တချို့
တွေကျပြန်တော့ ဦးနှောက်အတွင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထင်ပါရဲ့ သူမတူအောင်တွေးခေါ်
ချစ်သူကို ချစ်ခင်ကြင်နာရင်လည်း သူများတွေထက် ပိုတတ်တယ်။ ပိုပြီယုယတတ်တယ်။
တချို့ တစ်လိုင်းမောင်းတွေကျတော့ ချစ်သူကို ဒုက္ခပေးတတ်ကြတယ်။အစွန်းရောက်တတ်
ကြတယ်။ ကောင်းတဲ့ဘက်ရော၊ မကောင်းတဲ့ဘက်ရော အစွန်းရောက်စွာတွေးတောတတ်
ပုံမှန်သုံးစွဲနေကျသူတွေဆိုရင် အချိန်ကျရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ကာ စိတ်ဖောက်လွဲဖောက်
ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိဘ၊ သားသမီး၊ ဇနီးမယား ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမဆိုပြီ မကွဲပြားဘဲ
ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ သားယောက်ျားလေးသာမက သမီးမိန်းကလေးတွေကိုပါ မူးယစ်ဆေးသုံး
စွဲမှု ရှိ မရှိ စောင့်ကြည့်ဖို့လိုလာပါပြီ။ ရုပ်ပိုင်း၊စိတ်ပိုင်း ပြောင်းလဲမှုကို မိဘတွေက အသေး
အပေါင်းအသင်းတွေ၊ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ စသဖြင့်မိမိသားသမီးနဲ့
ပတ်သက် တာမှန်သမျှ မျက်ခြေမပျက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ .....သူ ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာပါပဲ။ ဖွန်ကြောင်တတ်တဲ့ သားသမီးဆိုရင်တော့
မူးယစ်ဆေးနဲ့ဝေးနိုင်ပါတယ်။သူကြောင်တဲ့သူက မူးယစ် ဆေးသုံးတဲ့သူဆိုရင်တော့ ချွတ်
လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု တစ်ခုတော့ အနည်းဆုံးရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခုထက်ပိုပြီး
လိုင်းပေါင်းစုံလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ဆိုရင်မူးယစ်စေတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှ အရက်၊
ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်မှအစဘာကိုမှမလုပ်တတ်ဘူး ၊ လုပ်လေ့မရှိကြဘူး။
ဒါတော့ တော်တော်ရိုးတာပေါ့လို့ ချီးမွမ်းမစောနဲ့အုံးကျန်တဲ့တစ်လိုင်းမှာတော့ တဘက်ကမ်းခတ်
အောင်မောင်းနေတတ်တယ်။ လူမသိသူမသိအောင်ပေါ့။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ထက်လွန်လာပြီ
ဆိုရင်တော့ ဆုံးမစကားတွေကြောင့်လူကောင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေ ရှိကြသလို သိလျက်နဲ့ ဆက်
ဘ၀ပေးအခြေအနေအပေါ်မူတည်တာပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ရင်တော့ လူကောင်းပြန်
မဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် လူတော်တွေစာရင်းထဲဝင်နေမှာပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းလာ
ကြတဲ့ တချို့တွေ ယနေ့ခေတ်မှာအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ၊ အရာရှိကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ ပြောရင်
ယုံနိုင်ပါ့မလား။ အများကြီးပါ လူတော်တွေပါ။
လူကောင်းတွေမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် လူဆိုးလို့လဲမဆိုနိုင်၊ လူမိုက်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။
လက်ရှိအချိန်ထိ ဆက်သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေ ရှိကြသလို ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ရပ်တန့်လိုက်
ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါ့ဗျာ။ ပညာတတ်လောင်းတွေ မူးယစ်ဆေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတာတွေလည်း
ဒါကြောင့် ပညာတတ်လောင်းတွေ လမ်းမှားနေရင် ထိန်းဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်လေ။
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေဟာ ကျောင်းတွေကို ပစ်မှတ်ထားလေ့ရှိကြတယ်။
အပေါင်းအဖော် အသင်းအဖွဲ့များတော့ ဈေးကွက်ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ရုပ်ရှင်လောကလိုမျိုးဂီတလောကလိုမျိုး ငွေကို အများအပြားရနေကြတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမျိုးတွေ
စိတ်ခံစားမှုအတုလုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေမှာ မူးယစ်ဆေးက အရေခြုံပေးတယ်လို့အယူအဆလွဲမှား
နေပြီ မိမိ၏အစွမ်းအစကို ပိုမိုတက်လာစေချင်လို့ ဆေးဝါးအကူအညီယူလေ့ရှိတတ်ကြတယ်။
အားကစားသမားတွေပါ သုံးစွဲတတ်ကြတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ မိမိသားသမီးတွေမပါဝင်သွားအောင်
ဂရုစိုက်ပေါ့။ မူးယစ်ဆေးကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်မှာနာမည် ဂုဏ်သတင်းပျက်စီးစေတဲ့
အပြင် လွန်လွန်ကျူးကျူးသုံးစွဲလာရင်အသက်ဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ မိဘနှစ်ပါးစလုံး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရတော့ သားသမီးတွေအပေါ်မှာရင်အုပ်
မကွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အခက်အခဲရှိကြပါတယ်။ မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်တတ်အောင် ဆုံးမနေရုံနဲ့မပြီးသေးကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက် ပဲ့ကိုင်ပေးမှသာလျှင်
မိမိသားသမီးများလူကောင်းလူတော်လေးများ ဖြစ်လာစေ ရန် ရည် ရွယ် လျက်......
ရေခဲ (ICE) လို့ခေါ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာ....
အိပ်လို့ မရတဲ့ ရေခဲမှာပါတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကပုံမှန်ထက် ၃ဆခွဲ ပိုမြန်လာမယ်...
အစာစားချင်စိတ်လုံးဝပျောက်သွားမယ်။ တခါသုံးပီးရင် ၂ရက်လောက် အိပ်ချင်စိတ်ကုန်မယ်
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်70% ကျော်ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပြီး
Over Sex တွေဖြစ်လာပြီး ဓမ္မတာမဟုတ်သောနည်းလမ်း
အသိစိတ်တွေလွတ်ကင်းသွားပြီး ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဆက်တိုက်
Ref: Aung Khit Htoo
ထိုင်း ၊ မလေးရှာ နှင့် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေကြားက ...